ပေးဆပ်ခွင့် ရခဲ့ရင်…… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ပေးဆပ်ခွင့် ရခဲ့ရင်……	11
Posted by La Yeik on Dec 10, 2014 in Creative Writing, Poetry | 11 comments
အချစ်ကို အဆိပ်သင့် ပန်းသီးလေးတစ်လုံးလို
တောင်ပေါ်သား says: ဟိုအဖွားကြီးနဲ့များ ကွာပကွယ် ၊ အင်းးးးး ဒါနဲ့ ဒီကောင်လေး အတော်မိုက်ပါ့နော် ၊
ဒီလိုမျိုးလေး ရှိနေရက်နဲ့
La Yeik says: အဲဒလို ဂျစ်ဒါဘာ အူးတောင်ပေါ်သားရယ်…
ဖားသက်ပြင်း says: အချစ် ဆိုတာ အေးကြင်ဗျ…
အေးကြင် ဆိုတာရော သိလား..
မျိုချလိုက်ရင် လည်ချောင်းထဲ အေးပီး ကြင်သွားတဲ့ အရည်ကိုပြောတာ…
ပြီးတော့ အေးကြင် က သိပ် သစ္စာရှိတာကလား …
ပညာရှိတေကတော့ စိတ်ရွှင်လန်းတက်ကြွစေတဲ့ ဆေးတမျိုး ဆိုလား…ခေါ်ကြသဗျ..
ကျုပ်ကတော့ ဟိုဘောလုံးဆြာလေး ခေါ်သလို အေးကြင်လို့ပဲ ခေါ်တယ်…
မနေ့ညက အေးကြင်နဲ့ ချိန်းတွေ့တာ … ည၁၁နာရီ ထိုးသွားပါတယ်ဆို..
တောင်ပေါ်သား says: နာလည်း ညက အဲအရည်နဲ့ ချိန်းတွေ့တာ ထမင်းလွတ်သွားတယ် ၊ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 176
La Yeik says: မီးက မိန်းခေး ဆိုဒေါ့ အေးကြင်နဲ့ ဒိတ်လုပ်လို့ ဖစ်သေးပါဘူး အူးလေးရယ်….
Mr. MarGa says: ဆောင်းတွင်းတောင် မအေးမှတော့
La Yeik says: အဲဒါ….အဲဒါပြောတာ
အဲနီညို ဖျက်လို့ပေါ့ အူးလေးရဲ့… ဒိပြင်ဆို အိုစကေပီ…
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: ပေးဆပ်ခွင့်ရချင်လို့. . .
ကျနော်ချစ်တဲ့ ကောင်မလေးကို. . .
အရင်ဆုံး အပိုင်သိမ်းပစ်မယ် စိတ်ကူးနေတယ်
La Yeik says: မဖွေးတဖွေး လား Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike This solution has been deemed correct by the post author
ခင် ခ says: ပေးဆပ်တုန်း မင်းမယူရင်
La Yeik says: အူးခင်ခ ကဗျာလေးက ပိုတောင် ကောင်းသေး….:k: